Cline Dion waxa ay la yaabtay lamaane iyagoo heesaya arooskeeda (VIDO) - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Cline Dion waxaa la yaabay lamaane iyagoo heesaya arooskeeda (VIDO)
Sawirada Sawirka: YouTube Screenshot
Cline Dion wuu ku soo laabtay. Markay diyaar u tahay joojiso degenaanshihiisa Las Vegasheesaha ayaa ku dhawaaqay mid cusub Albaabada "Courage" ilaa bisha November iyo sidoo kalesafar amerikan ahtobankii sano ee hore. Munaasabada, turjubaanka "Qalbigaygu wuu sii socon doonaa" tegey on show saxaarad Jimmy Kimmel. Waxaa intaa dheer, xiddiga ciidanka a nice yaab Jason iyo Kate labo ahaa oo ku saabsan in la guursaday in a cibaadaysiga Las Vegas, meel u dhow Tiyaatarka ah o Zappos ahaa ee laga duubay bandhig habeen ah. Haatan nimanku iyo naagahoodu waxay la yaabeen inay arkaan arooskooda habeenkii arooska David Spade iyo ... Cline Dion, ka dibna fanaan maxali ah oo diyaar u ah inuu ku caawiyo . Xiddigga Canadian-ka ayaa ka codsaday Ballanqaadka 1996 "Sababtoo ah waxaad i Laabtay". Xilliga taabashada ah oo si cad u riixday niman dhallinyaro ah.
"Lagu siiyay inaad weli wadajir tahay!"
Xiddiggu markaa wuxuu ku soo biiray labada naanood wuxuuna ku casuumay mid ka mid ah riwaayadeeda soo socota. laakiin shuruud ah in aad weli wadajir u tahay . Inta u dhaxaysa laba kaftanka dusha sare ee fadhiga, heesaha ayaa ku kalsoonaa sanadka 16 sanadka Las Vegas. Markii aan imid Las Vegas, waxaa la filayay inay socoto laba bilood, ugu dambeyntii waxaan ka jiraa tan 16 sano Waxay tiraahdaa magaalada ay aragtay sida gurigiisa labaad . Laakiin Cline Dion wuxuu ku saabsan yahay in uu soo gabagabeeyo degankiisa si uu u qoro bog cusub: Aniga ahaan, ma ahan su'aal ah inaan ka tago Las Vegas, lakiin halkii ay wadada u wadaan, sida cutub cusub oo nolosheyda ah. Waxaan ku socdaa dalxiis caalami ah, waxaan doonayaa inaan sii daayo albaab cusub oo la yiraahdo "Courage" .
Safar sanno ah oo bilaabanaya Qubec. Waa inaad timaadaa! Ha i sii daayo farshaxanka, oo si muuqata u caafimaad qaba caafimaad wanaagsan fiidkii, waxay dhagaysteen dhagaystayaasha. Cline Dion ka dibna wuxuu ku qurxiyey tarjumaadda "Dambaska"lagu duubay heesaha "Deadpool 2". Waxaan ku soo biiray filimka maxaa yeelay waxaan helay emails, emails badan (...) waan hubay Ryan Reynolds wuxuu rabay inaan ka ciyaaro filimka. Waxaan bilaabay inaan ka shaqeyno wejiga wajiga mudo dheer ka hor inta aanan ogaanin inaanan waxba ka qabin filimka. Wuxuu kaliya rabay inaan gabyi lahaa waxay sheegtay in ay sharraxayso dhalashada horyaalka.
Fiiri Cline Dion oo la yaab leh Jimmy Kimmel:
Fiiri wareysiga Cline Dion ee Jimmy Kimmel:
Ka daawo Cline Dion heesaha "Ashes" at Jimmy Kimmel's:
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.chartsinfrance.net/Celine-Dion/news-109878.html